Caadi ahaan: Codsiyada Kaydka Dheeraadka ah ee Isticmaalka
Baahida loo qabo bakhtiinta online waa kordhaysa maalinba maalinta ka dambaysa sababtoo ah shirkado badan ayaa isticmaala a. qadar ballaaran oo xog ah ujeedooyin kala duwan. Ururada iyo shakhsiyaadka kala duwan waxay leeyihiin baahiyo kala duwan shabakad . Xaqiiqdii, hadda, hadda waxaa jira noocyo aan xadidnayn oo ah baahida ka saarista xogta - coral hats for weddings. Si aad u muujiso muhiimadda xog uruurinta, 7 codsiyada wax laga soo saaro ee sida caadiga ah loo isticmaalo ayaa lagu qeexay midda hoose.
1. Ururinta xogta laga helay faylasha PDF
Tirada tirtiridda xogta codsi ayaa ah inay ururinayso xog gaar ah oo laga soo qaaday faylasha PDF iyo in loo rogo faylasha faylasha. Mid kasta oo ka mid ah feylasha xogta bartilmaameedku waxay leeyihiin qiyaastii 15 illaa 20 dhibcood oo xog ah oo ku saabsan 5 ilaa 15 bog.
2. Soo saarida macluumaadka mashiinnada raadinta iyo wicitaanada internetka
Tani waa baahida loo saaro xogta caadiga ah. Waxay u baahan tahay xog ururinta mashiinnada raadinta iyo wicitaanada internetka oo waxay galaan diiwaangelin cayiman.
3. Liisaska Xayeysiinta Emailka iyo xaqiijinta
Codsigan ka saarista macluumaadka waxay u baahan tahay cinwaan iimeyl, magaca shirkadda, lambarka taleefanka, gobolka, iyo magaalada halkaan ama shirkadan. Macluumaadka noocaan ah waxaa badanaa looga baahan yahay ujeedooyinka suuq-geynta. Macluumaadka waa in la xaqiijiyaa oo loo abaabulaa fududeynta isticmaalka. Liiska buuxa ee shirkadaha si sahlan ayaa loo xoqin karaa wicitaanada, laakiin macluumaad dheeraad ah ayaa laga heli karaa website-ka rasmiga ah ee shirkad kasta.
4. Qorista liis gareysiinta Emailka
Mashruucan waxaa loogu talagalay in lagu uruuriyo cinwaanada emailka dadka leh YouTube-ka. Waxaa loo isticmaali karaa in lala wadaago iyaga ama suuq geynta qaarkood / adeegyo ah. Waxa kale oo loo isticmaali karaa in lagu sameeyo sahan muhiim ah.
5. Liiska dhammaan ijaarka guryaha ee meel gaar ah
Tan saarista shabakadda codsi ayaa loo isticmaalaa si loo helo liistada guryaha kirada guryaha website-kan gaar ah. Inkasta oo boggaga bartilmaameedku leeyahay liiska kirooyinka guryaha ee dhowr meelood, kaliya kuwa ku jira meel gaar ah ayaa loo baahan yahay codsigan. Ilaa iyo 1400 ilaa 1650 kirada guryaha ayaa ku qoran bogga internetka, kuwa loo baahan yahay waa in la sifeeyaa oo la gooyaa. Shirkad kasta oo ijaarka ah, faahfaahinta loo baahan yahay waa faahfaahinta hantida, magac, iyo kiraystayaasha '. Dhammaan xogta la soo rogay waa in lagu dhoofiyaa qaab xisaabeed oo dheellitiran sida ku cad codsadaha.
6. Faahfaahinta xiriirka macalimiinta maaliyadda ee Mareykanka
Codsigan soo saaridda xogtan ayaa ah in la raadiyo boggaga internetka ee dhammaan jaamacadaha dalka Mareykanka si ay u qaataan cinwaannada emailka iyo lambarrada telefoonada.
7. Database-ka Ganacsatada UK
Waajibaadkan shabakadda ah ee loogu talagalay waxaa loogu talagalay soo-ururinta shirkadaha baabuurta UK ee ku takhasusay magaca Audi iyo Nissan. Wixii kasta oo ka mid ah iibiyeyaasha, faahfaahinta loo baahan yahay waa lambarka taleefanka, cinwaanka emailka, cinwaanka boostada, magaca ganacsiga, iyo magaca maamulaha.
Gebogebo, waxaa jira boqollaal codsiyo isdabajoog ah. Kuwa kor ku xusan waxay ahaayeen kuwo si aan kala sooc lahayn loogu doortay ujeedada sawirka.